QQE New Forex chakarurama - Forex zviratidzi Download
musha MT4 zviratidzi QQE New Forex chakarurama
QQE New Forex chakarurama
QQE New Forex chakarurama ndiyo MASHOKO EZVAKAITIKA pamusoro quantitative uye Qualitative Kukoshesa chakarurama kuti rinoshandiswa kutengesa binary kusarudza pamusoro mt4 platforms. It haungoratidzwi nezvatinenge mari vaviri vaviri, chero zvokutengeserana nguva kana timeframe. It anoshanda panheyo inotungamirwa INDICATIVE anonongedzera ari histogram vakaronga kushandisa mavara akasiyana.
The chinhu chitsva paakati ichi ndicho chiratidzo miseve kuti aratidze uko muzvinashawo anogona kuzarura refu chinzvimbo uye apo kuisa munhu pfupi nechinzvimbo. The refu Nzvimbo Mureza chinhu mutema museve ukuwo pfupi nzvimbo mureza ndiwo dzvuku chiratidzo. Uyewo mune shanduro itsva iyi QQE ane muzvinashawo anogona kugadzira mavara ari miseve; havafaniri kuva hazvo tsvuku uye girini. Uyewo unogona akaisa chenjedzo kuti kukunakira. The chenjedzo vanochinjwa panguva zvose alertsOnSignalCross uye alertsOnZeroCross parameters.
chakarurama Izvi yekudyidzana kuvimba RSI asi ayo ndokudzora shanduro.
Kana ukashandisa chakarurama ichi unofanira nechokwadi kuti imi kanenge kurishandisa akabatana zvimwe zviratidzo zvakafanana FXI pivot pfungwa uye migero kuitira kudzivisa vasave zvinorasisa kwenhema uye chiratidzo kuitika.
It anobva pakuva kunzwisisa kukarukureta pamusoro ndokudzora shanduro RSI zviratidzi. Izvi zvinoita kuti tibvunze kuti misara miviri vakaratidza pamusoro penzvimbo chakarurama hwindo. mitsetse Ava kutsanya kubvongodzwa uye anononoka zvinofamba mitsetse. Naizvozvo chinoratidza ane pamitsara mitatu kuti waronga.
Fig.1. The yakasiyana Mitsetse uye kwevari QQE
On the chinoratidza hwindo iri 50 pamwero inoshandiswa nokuda anonongedzera.
QQE Inzwa Zvinotaurwa miganhu
Somunhu muzvinashawo pane parameters dzakawanda kuti unofanira kuisa pamberi kushandisa QQE chinoratidza. Chokutanga ndiye SF kuti inomirira smoothening chinhu uye yakaiswa kuti default pamusoro 5. Mumwe ndiye AlertLevel yakaiswa kuti kuisa chenjedzo uye zviri maererano default wakaiswa kuti 50. Mostly hakukurudzirwi kuchinja parameter ichi kana uri kwazvo kwazvo kurangwa chete kuitika uye nzira yauri kushandisa.
Uyewo pane MsgAlerts riri basa kuratidza mashoko. Zvinonzi wakaiswa kuti vechokwadi default uye kamwe ichokwadi shoko unoratidzwa. Zvadaro pane SoundAlerts anoisa kurira chenjedzo uye default wakaiswa kuti zvechokwadi. Uyewo ari SoundAlertFile yakaiswa kuti alert.wav uye ndiro zita riri basa kurira mutsindo akangwarira.
Pakupedzisira ari parameter kuti ndamutuma email wakangwarira email address uye anonzi sezvo eMailAlerts.
Kushandisa QQE chakarurama kuti kuchinjanisa
The QQE chakarurama inogona kushandiswa nenzira dzakasiyana-siyana, zviri:
1) For chart chiratidzo.
In nzira iyi muzvinashawo zvinofanira kutarira kana RSI mutsetse ayambuka 50 pamwero kana downwards kana uchikwira. Kana downwards ipapo chiri uptrend uye nokudaro mukana wakanaka kuvhura kwenguva nechinzvimbo. The vakutarisire ichokwadi kuti ikatengesa hurongwa.
2) Kuona kuti overbought uye oversold pamusika mumatunhu.
Izvi zvinoitwa nokucherechedza kana RSI inopfuura pamusoro 30 kana 70 danho. Kana RSI zvikanzwika kana inopfuura kuti 70 sandara mudenga kuti pane overbought. Kana ayambuka 30 pamwero downwards ipapo chiri oversell.
3) Zvairatidza yakashatiswa mumufambiro.
Izvi zvinobatsira mune vachifanotaura mutengo reversals ose pamusika mumatunhu. Open Demo nhoroondo yokuedza chakarurama ichi.
QQE New Forex chokukomborerwa ari Metatrader 4 (MT4) paakati uye musimboti wacho Forex chinoratidza ndiko zvokuchinja vaunganidza nhoroondo date.
QQE New Forex chokukomborerwa inopa mukana kuona peculiarities siyana uye mapatani mu mutengo emuchina izvo usingaonekwi chinoabatsira.
How yokugadza QQE New Forex Indicator.mq4?
Copy QQE New Forex Indicator.mq4 yenyu Metatrader Directory / nyanzvi / zviratidzi /
Right watinya musi QQE New Forex Indicator.mq4
Chakarurama QQE New Forex Indicator.mq4 rinowanika Chart yako
How kubvisa QQE New Forex Indicator.mq4 kubva Metatrader yako 4 chati?
QQE New chakarurama
Previous nyayaSecret Profit Booster Forex chakarurama
inoteveraFibonacci Forex chakarurama